သတင်းမီဒီယာကျင့်ဝတ်နှင့် online မီဒီယာ သင်တန်း 5-7. 7. 2017, မကွေးမြို့ ~ Myaylatt Daily.
သတင်းမီဒီယာကျင့်ဝတ်နှင့် online မီဒီယာ သင်တန်း 5-7. 7. 2017, မကွေးမြို့
11:22 AM သတင်း No comments
သတင်းမီဒီယာကျင့်ဝတ်နှင့် online မီဒီယာ သင်တန်း
5-7. 7. 2017, မကွေးမြို့
ဘီဘီစီမီဒီယာအက်ရှင် အနေဖြင့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတွင်ရှိသည့် သတင်းမီဒီယာသမား၊ သတင်းထောက်များအတွက် အွန်လိုင်း မီဒီယာဆိုင်ရာ သတင်းမီဒီယာကျင့်ဝတ် အထူးပြုဘာသာရပ်ဖြင့် (၃) ရက်တာသင်တန်းတစ်ခုအား ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသဖြင့် တက်ရောက်ရန် ဖိတ်ခေါ်လိုပါသည်။ သင်တန်းတွင် သင်တန်းသားများ၏ အရည်အသွေးမြင့်ပေးရန်နှင့် မိမိ တို့၏ မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများ အတွက်လည်း အွန်လိုင်း သတင်းတင်ဆက်မှုအရည်အသွေး နှင့် နားထောင်ကြည့်ရှုသူ ပရိတ်သတ်ထံသို့ ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာ လက်လှမ်းမှီရောက်ရှိနိုင်ရန် အထောက်အ ကူပြုမည်ဟု ရည်ရွယ်ပါသည်။
သင်တန်း သုံးရက်အတွင်း ပါဝင်မည့်ခေါင်းစဉ်များမှာ --
• မိုဘိုင်း ဗီဒီယို အတတ်ပညာများ
• လူမှုကွန်ယက်ဆိုင်ရာ နည်းပညာများ
• ကောလဟလသတင်း၊ မှားယွင်းသောသတင်းများဖော်ပြမှု၊ အမုန်းစကားများနှင့် ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းခြင်း
• ပဋ္ဋိပက္ခအတွင်း မီဒီယာများ၏ အခန်းကဏ္ဍ
သင်တန်းအား ဘီဘီစီမီဒီယာအက်ရှင်မှ သင်တန်းဆရာများ ဦးဆောင်၍ မကွေးမြို့တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး သင်တန်းတွင်း အယူအဆများ နှီးနှော ဖလှယ်ခြင်း ၊ ဆွေးနွေးခြင်းများ၊ လက်တွေ့သရုပ်ဖော်မှုများပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။
လျှောက်ထားလိုသူများအနေဖြင့် အနည်းဆုံး သတင်းထောက်လုပ်သက်တစ်နစ် နှင့်အထက်အတွေ့အကြုံရှိသူ ဖြစ်ရပါမည်။သင်တန်းတွင်မြန်မာဘာသာစကားဖြင့် ပို့ချသင်ကြားမည်ဖြစ်ပြီး အင်္ဂလိပ်ပိုင်းဖြင့် သင်ကြားမှုတွင်လည်း ဘာသာပြန်လည်းရှိမည်ဖြစ်သည်။ သင်တန်းအား မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအခြေစိုက် သတင်းမီဒီယာများမှ သတင်းထောက်များ လျှောက်ထားနိုင်သည့်အပြင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအခြေစိုက်သတင်းအားဖော်ပြရေးသားသော အခြားမီဒီယာများမှ သတင်း ထောက်များ လည်းလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
စိတ်ဝင်စားသူသတင်းထောက်များအနေဖြင့် jack.aung@mm.bbcmediaaction.org သို့ အီးမေးလ်ဖြင့်လျှောက်လွှာများ ပေးပို့ရပါမည်။ လျှောက်လွာတွင် အောက်ပါအချက်များဖြင့် ပေးပို့ ရမည်
• မိမိလုပ်ကိုင်နေသော မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းအမည်
• မိမိတက်ရောက်ခဲ့ဖူးသော သင်တန်းများ
• ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာအပြည့်အစုံ၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ အီးမေးလိပ်စာ စသောအချက်အလက်များ ဖြင့် ဇွန်လ (၂၆) ရက် တနင်္လာနေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး ပေးပို့ရမည်။
ဘီဘီစီမီဒီယာအက်ရှင်သည် ဘီဘီစီ၏ နိုင်ငံတကာမီဒီယာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွင် လုပ်ကိုင်နေသော NGO တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့သည် မီဒီယာကို အသုံးပြုပြီး ဆင်းရဲမွဲတေမှု မှလွတ်မြောက်ရန် နှင့် မိမိတို့၏အခွင့်အရေးကို သိရှိနားလည်ရန် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့အနေဖြင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ဒေသခံမီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပူပေါင်းပြီး ဆန်းသစ်သည့် အစီအစဉ်များကို ထုတ်လွှင့်ပြီး ပရိသတ်များအား အသိပေးခြင်း နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပရိသတ်များစိတ်ဝင်စားလာအောင်လုပ်ပေးခြင်း။ မီဒီယာအခန်းကဏ္ဍများတွင် ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးလာစေရန် သင်တန်းများပို့ချခြင်းဖြစ်သည်။